Ubhodle ngokuklolodelwa ngabeSundowns uMosimane - Impempe
Ubhodle ngokuklolodelwa ngabeSundowns uMosimane
Yize ezamile ukukhuluma kahle angazwakali uthi ukusiphi isimo ngokwemizwa, uPitso Mosimane ukuvezile ukungenami kwakhe ngokukloloda kwabaqeqeshi beMamelodi Sundowns. Lokhu bekwenzeka ngaphambi komdlalo we-Al Ahly neMasandawana kwiCAF Champions League.
EzikaMosimane zidlule ngo 2-0 emdlalweni womlenze wokuqala kanti uveze imizwa yakhe ngemuva komdlalo. Uthe yena usesaba ngisho ukuncoma abadlali be ngoba esabela ukuthi kuzothiwa useyabafuna. Ukusho lokhu ngesikhathi ephika amahlebezi athi ucathamela umgadli weSundowns, uPeter Shalulile aze kuye kwi-Al Ahly eGibhithe la aseqeqesha khona.
“Wonke umuntu uthi ngifuna abadlali beSundowns,” usho kanje uMosimane ekhuluma nabezindaba ngemuva kokuhlula amaBrazilians ngo 2-0 ngoMgqibelo.
“Kukhona umbiko othe mina ngifuna uShalulile – akulona iqiniso lokho. Uyedwa vo umdlali i-Al Ahly eke yakhuluma ngaye neSundowns, nguGaston Sirino. Lokhu okunye kusuka kubantu abazakhela amahlebezi nje,” kuchaza yena.
EzikaMosimane zizibeke ethubeni elingcono lokudlulela emidlalweni eyandulelal owamanqamu njengoba zihamba phambili ngo 2-0. Umlenze wesibili uzoba seLucas Moripe Stadium ngoMgqibelo. Ukhale ngokukloloda kwabaqeqeshi beSundowns, wathi isangawaketula amatafula, kusale kukhalwa.
“Kuningi obekukhulunywa ngami iviki lonke (elidlule), ngazithulela nje. Bengizinakele umsebenzi wami ngoba besinomdlalo omkhulu ebesizobhekana nawo.
“Kwesinye isikhathi singabaqeqeshi seqiwa yinjabulo bese sisho izinto ezikhubaza abadlali beqembu esizodlala nalo. Ngikubonile ukuthi abadlali bami bakhubekile ngobekushiwo abaqeqeshi beSundowns, mina angisibonanga isidingo sokwenza lokho ngoba ngiyayihlonipha kakhulu iSundowns.
“Kunombiko obuthi iSundowns ayiqwashiswa yi-Al Ahly. Mina bengiqwasha ke impela ngenxa yeSundowns ngoba ngake ngaligqoka ijezi layo ngazinikela ekuyisebenzeleni ngakho konke enginakho.
“Ngibuke imidlalo eyisikhombisa yeSundowns qede ngazivalela umlomo, ngagxila emsebenzini wami. UMdali usisizile ngomphumela. Lento ayikapheli kanti iSundowns isangawaphendula amatafula. Ngibahlonipha kakhulu abadlali nabalandeli beSundowns,” kusho uMozimane.
Previous Previous post: Usethole ikhaya elisha uMakhoba oshiye kwiStarline
Next Next post: Uvume amava ezimbangi ezimbukise izithende uMathanga